नेपाली चलचित्रका राइजिङ्ग हिरोहरु – मून नेपाल
moonnepal 0	नोभेम्बर 6, 2019 7:49 बिहान
विजयरत्न तुलाधर, अहिले नेपालको चलचित्र जगत युवामय भएको छ । चलचित्रको हरेक विधामा युवाहरुको जमातले राम्रै प्रभुत्व कायम गरीसकेको छ । झन त्यसमाथि
विजयरत्न तुलाधर, अहिले नेपालको चलचित्र जगत युवामय भएको छ । चलचित्रको हरेक विधामा युवाहरुको जमातले राम्रै प्रभुत्व कायम गरीसकेको छ । झन त्यसमाथि पनि अभिनय विधामा युवाहरुको प्रभुत्व उल्लेखनीय छ ।
यसरी प्रभुत्व कायम गरेका युवाहरुको चर्चा गर्दा पल शाह, प्रदीप खड्का र आयुष्मान देसराज जोशीको नाम अग्रपंत्तिमा आउँछ । उसो त आकाश श्रेष्ठ, सुशील श्रेष्ठ, सलिन मान बानिया पनि अहिलेका चर्चित नामहरु नै हुन् तर पल शाह, प्रदीप खड्का र आयुष्मानले आफ्ना चलचित्रहरुका माध्यमबाट आफुलाई नेपाली चलचित्रमा उदियमान अभिनेताहरुका रुपमा पुष्टि गरेर देखाई सकेका छन् ।
यस्तै गरी अहिले “ए मेरो हजुर २”बाट चलचित्रमा प्रवेश गर्न लागेका सलिनमान बानियालाई पनि अहिले चलचित्र क्षेत्रमा एक सम्भावना बोकेका उदियमान नायकका रुपमा लिने गरिएको छ । एक अभिनेत्रीका रुपमा प्रभुत्व जमाई सकेकी झरना थापाले निर्देशनको यात्रा शुरु गरेको पहिलो चलचित्र “ए मेरो हजुर २” का नायक सलिनमान बानियालाई उनको कोरीयन फिल्मका हिरो शैलीलाई धेरैले मन पराई रहेका छन् भने यो चलचित्रको अप्रत्याशित सफलताले गर्दा सलिनलाई अहिले अनमोल के.सी. पछिको स्टारसम्म पनि भन्न थालिएको छ ।
हाल युनिग्लोब कलेजमा बि बि ए अध्ययन गरी रहेका सलिनमान बानिया एक मोडलका रुपमा प्रभुत्व कायम गरी सकेका युवा हुन् । उनलाई निर्माता सुनिल रावलले “लाउरे” चलचित्रका लागि नायकका रुपमा छनौट गरेका थिए । तर केही कारणवश यो चलचित्रको शुटिंग शुरु हुन ढिलाई हुँदा निर्मात्री एवं निर्देशक झरना थापाले “ए मेरो हजुर २” बाट उनलाई चलचित्र क्षेत्रमा पदार्पण गराएकी हुन् ।
उदियमान नयाँ कलाकारहरुको चर्चा गर्दा अमृत ढुंगाना पनि यहीं पंक्तिमा पर्न आएको नयाँ नामको रुपमा देखा परेको छ । अमृत ढुंगानाले अभिनय गरेको पहिलो चलचित्र “शायद २” हो ।
पाँच वर्ष अघि बनेको सफल चलचित्र “शायद” को नाम सापट लिएर बनेको “शायद २”मा अमृत ढुंगानाले हास्य अभिनयबाट शुरु भई रौद्र अभिनयसम्मको अभिनय पेश गरेर दर्शकको मात्र नभई चलचित्रकर्मिहरुको समेत मन जितेका छन् । यसरी चलचित्र मार्फत मन जित्नु भन्दा अगाडि उनले मण्डला थियटरमा केही नाटकहरुमा पनि अभिनय गरी सकेका छन् भने युट्युब मार्फट प्रसारण हुने योर स्टाइल टिभीका केही लघु चलचित्रहरुमा पनि अभिनय गरी सकेका छन् ।
चलचित्र क्षेत्रमा यसरी उदाएका युवा अभिनेताहरु मध्ये प्रदीप खड्काको चर्चा गर्दा उनीले आफुलाई नायकको रुपमा स्थापित गराउन आफु स्वयंले “स्केप” नामक एउटा चलचित्र बनाएका थिए भन्ने देखिन्छ । तर यो चलचित्रले व्यावसायिक सफलता हासिल गर्न सकने तरपनि उनको अभिनयले भने प्रसंशा कमाउन सफल भएको थियो । “स्केप”मा सशक्त अभिनय प्रस्तुत गरेकै कारण उनी निर्देशक सुदर्शन थापाको “प्रेम गीत”का नायक छानिए । यो चलचित्र सफल पनि भयो ।
चलचित्रको भाषामा भन्ने हो भने “प्रेम गीत”ले “सुपर हिट”को दर्जा पायो । प्रेम कथामा प्रभावशाली चलचित्र बनाउन सक्ने निर्देशकका रुपमा परिचित सुदर्शन थापाले उनलाई नेपाली चलचित्रका एक रोम्याण्टिक नायकका रुपमा स्थापित गराए तर “प्रेम गीत”को निर्माणको क्रममा यस चलचित्रका निर्माता सन्तोष सेन र निर्देशक सुदर्शन थापा बीच मनमुटाव भएपछि “प्रेम गीत”को सिक्वेलको रुपमा बनेको “प्रेम गीत २” अर्कै निर्देशक राम शरण पाठकको काँधमा गयो र नायक भने प्रदीप खड्का नै छानिए ।
अहिले “प्रेम गीत २” पनि प्रदर्शनमा आईसकेको छ । यो चलचित्रलाई पनि दर्शकले मन पराएका छन् । अहिले भर्खरै उनले “लिलिबिलि” बाइस लाख रुपिंयामा साइन गरेको चर्चा छ भने यसरी एक अभिनेताका रुपमा प्रदीप खड्काले राम्रै प्रभुत्व कायम गरेका छन् ।
निर्माता सन्तोष सेन र निर्देशक सुदर्शन थापा बीचको मनोमालिन्यता पछि निर्देशक सुदर्शन थापाले “म यस्तो गीत गाउँछु” चलचित्र बनाए । उनले यस चलचित्रमा नायकका रुपमा पल शाहलाई लिएका छन् । पल शाहको पहिलो चलचित्र “नाईं नभन्नु ल ४” हो । यो चलचित्रमा नायकको रुपमा अभिनय गर्नु भन्दा अगाडि उनले थुप्रै म्युजिक भिडियोहरुमा अभिनय गरी सकेका थिए ।
उनले अभिनय गरेको पहिलो म्युजिक भिडियो सुनिल गिरीको “को होला त्यो” बोलको गीत हो भने त्यसपछि उनले टेकेन दाहालको पूर्णिमाको चन्द्रमा, पुनर्जनममा कमल क्षेत्रको आई लभ यु , शिव परियारको जिन्दगीको पात्र लगायत दर्जनौं गीतका म्युजिक भिडियोहरुमा अभिनय गरेर अनुभव बटुलि सकेका थिए ।
यसरी चलचित्र अभिनयमा पर्दापण गरेका पल शाहको “नाईं नभन्नु ल ४” पनि चलचित्रवृत्तमा “हिट” नै मानिएको चलचित्र हो । उनको यो सफलताको यात्रामा अहिले “म यस्तो गीत गाउँछु” चलचित्र पनि थपिन आएको छ । यो चलचित्रको सफलताले पल शाहलाई पनि नेपाली चलचित्रका एक सम्भावना बोकेका नायकका रुपमा अगाडि ल्याएको छ ।
एकातिर पल शाह र प्रदीप खड्काले रोम्याण्टिक नायकहरुका रुपमा प्रभुत्व जमाउन सफल भएका छन् भने अर्कोतिर गत वर्ष प्रदर्शित “चपली हाइट २”का नायक आयुष्मान देसराज जोशीले आफुलाई एक्शन भुमिकामा स्थापित हुन सक्ने सशक्त अभिनेताका रुपमा अगाडि ल्याएका छन् । आयुष्मान देसराज जोशी बैंकिंग क्षेत्रका स्थापित नाम रविना देसराज श्रेष्ठ र भवेनमान जोशी जस्ता व्यवसाय जगतमा ख्याति कमाएका दम्पत्तिका छोरा हुन् ।
पल शाह जस्तै आयुष्मानले चलचित्रमा अभिनय गर्नुभन्दा पहिला म्युजिक भिडियोहरुमा अभिनय गरीसकेका छन् । उनले आफ्नै युट्युब च्यानल समेत खोलेका छन् । जसमा उनी आफ्ना म्युजिक भिडियोहरु लगयतका कुराहरु अपलोड गर्ने गर्छन् । यतिमात्र नभई उनी एक राम्रो चित्रकार पनि हुन् । उनले आफ्नो कलायात्राको आरम्भ भने कान्तिपुर टिभीमा कार्यक्रम प्रस्तोताका रुपमा गरेका थिए ।
ग्लोबल बिट्स र हलिबलिउड शिर्षकका दुई वटा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका आयुष्मान एक मोडलका रुपमा पनि परिचय बनाएका प्रतिभा हुन् । उनले अभिनय गरेको “चपली हाइट २”ले व्यावसायिक रुपमा खासै ठूलो सफलता हासिल गर्न नसके पनि उनको अभिनयले भने राम्रै प्रसंशा कमाउन सफल भएको थियो । यसरी अभिनयले तारीफ पाए पनि आफुलाई प्रसंशाको मात नलागेको बताउने आयुष्मानलाई “एन एफ डि सि नेशनल फिल्म अवार्ड २०७३” का लागि सर्वश्रेष्ठ नव नायक पुरस्कार जित्न सफल भएको छ ।
यसरी सफलताको यात्रामा अगाडि बढ्न शुरु गरेका आयुष्मानका लागि प्रतिस्पर्धीका रुपमा आफ्नै भाई आशिरमान देसराज जोशी चुनौती बन्न पुग्ने कुरा अहिले चर्चामा छ । जेरी, होस्टेल र गाजलु जस्ता सुपर हिट मानिएका चलचित्रहरुमा अनमोल के.सी.लाई नायक बनाएका निर्देशक हेमराज बि.सी.को निर्माणाधीन चलचित्र “ग्यांग्स्टर ब्लुज”बाट चलचित्रको पर्दामा पर्दापण गर्ने तयारी गरीरहेका आशिरमानलाई अहिले अनमोल के.सी.को विकल्पका रुपमा लिने गरीएको छ ।
मोर्डन इण्डियन स्कूलबाट एस.एल.सी. दिएका आशिरमान विद्यार्थी कालदेखि नै जेहेन्दार मानिएका विद्यार्थी हुन् । कुशल नेतृत्वका धनी मानिने आशिरमानले स्कूल जीवनमा हेड ब्वाईका रुपमा रहि आफ्ना सहपाठीहरुलाई डो-याउने अभिभारा पाएका थिए भने उनले आफ्नो अभिभारा कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका थिए । सानै उमेरदेखि अढाईका अतिरिक्त अन्य कृयाकलापहरुमा पनि राम्रो अभिरुची राख्ने गरेका आशिरमानले “मिस्टर एम आई एस” उपाधी पनि जितेका छन् ।
सानै उमेरदेखि मेघावी विद्यार्थीका रुपमा परिचय बनाएका आशिरमानलाई निर्माता सुनिल रावलले “शायद २”का लागि छनौट गरेका थिए । तर अध्ययनमा व्यस्त रहनु पर्ने समय परेकोले उनले “शायद २”मा अभिनय गर्न भ्याएनन् । यसैबीच “ग्यांग्स्टर ब्लुज”कोलागि अनमोल के.सी.को समय(डेट)प्रतीक्षा गर्दै गरेका निर्देशक हेमराज बि.सी.ले आफुले इच्छाएको नायक अनमोल के.सी.सँग आफ्नो चलचित्रका लागि समय मिलाउन सकेन र उनले विकल्पको रुपमा आशिरमानलाई पाए । हाल यो चलचित्र प्रदर्शनको तयारीमा छ भने यो चलचित्रको टे«लर र गीतले राम्रै प्रसंशा बटुलिरहेको छ । आशिरमान जस्तै अनमोल के.सी.को विकल्पको रुपमा चर्चा पाएका युवा अभिनेताहरुमा सुशील श्रेष्ठ र आकाश श्रेष्ठ पनि पर्छन् ।
आकाश श्रेष्ठले अनमोल के.सी.कै आमा सुष्मिताले निर्माण गरेको “म त तिमै्र हुँ”बाट चलचित्र अभिनयमा प्रवेश गरेका हुन् । उनले अभिनय गरेको पहिलो चलचित्रले व्यावसायिक सफलता हासिल गर्न नसके पनि उनको अभिनय भने प्रसंशित नै भएको छ । हाल उनी उदियमान नायिकाहरु मध्ये सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेकी साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहसित “तिमी सँग” शिर्षकको चलचित्रमा काम गरी रहेका छन् ।
साम्राज्ञीसँग अभिनय गरेकै कारण पनि अहिले आकाश श्रेष्ठको चर्चा चुलिएको छ भने साम्राज्ञीसँगै “ए मेरो हजुर २”बाट चलचित्रमा प्रवेश गर्न लागेका सलिनमान बानियालाई पनि अहिले चलचित्र क्षेत्रमा एक सम्भावना बोकेका उदियमान नायकका रुपमा लिने गरिएको छ ।
नेपाली चलचित्रका युवा अभिनेताहरुको चर्चा गर्दा सबैभन्दा अगाडि आउने नाम भनेको अनमोल के.सी.कै हो । “होस्टेल”बाट आफ्नो अभिनय यात्रा शुरु गरी जेरी, गाजलु र ड्रिम्स मार्फत युवा दर्शकहरु (विशेष गरी महिला वर्ग) माझ अत्याधिक लोकप्रिय अनमोल के.सी.लाई कुनै परिचयको खाँचो रहेन भने अहिले चलचित्रमा प्रवेश गर्ने गरेका युवा अभिनेताहरुलाई धेरैले अनमोल के.सी.सँग दाँज्ने गर्छन् । र अनमोल के.सी.को विकल्पका रुपमा हेर्ने गर्छन् ।
त्यस्तै एक युवा अभिनेता सुशील श्रेष्ठ पनि छन् । यहाँसम्म कि “होस्टेल रिटन्र्स” प्रकाशमा ल्याईंदा धेरैले सुशील श्रेष्ठलाई अनमोल के.सी. नै भन्ठानेका थिए । कतिपय दर्शकहरु त झुक्किएर हलसम्म पनि पुगेका थिए ।
यसरी अनमोल के.सी.सँग दाँजिएका सुशील श्रेष्ठको पहिलो चलचित्र “होस्टेल रिटन्र्स”ले राम्रो सफलता हासिल गरेपछि धेरैले सुशील श्रेष्ठलाई अनमोल के.सी.को ठाउँ लिन सक्ने नायक पनि भन्नेहरु भेटिए तर हालै आएर उनको “कारखाना”र“शायद२ जस्ता दुई चलचित्रले आशातित प्रभाव छोड्न नसक्दा भने उनी प्रति गरिएको आशा छाँयामा पारिन थालेको छ ।
यसरी अहिले चलचित्रमा युवा नायकहरुको संख्या बढ्दै गईरहेको छ भने आफ्नो प्रतिभा पुष्टि नगरेसम्म कसैलाई पनि स्थापित नायक भनेर भन्न सकिन्न भन्ने कुरा पनि भईसकेको छ भन्दा कुनै फरक पर्दैन ।
बज्रगुरु जपसधनाका केहि दृश्यहरु